Kumakh National Daily
शिक्षा यौन तथा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि प्रवास मनोवाद भिडियो
आज आमाको मुख हेर्ने दिन, के छ यसको महत्व ?
वैशाख ११ गते ।
मातातिर्थ औंशि अर्थात आमाको मूख हेर्ने दिन प्रत्येक वर्ष बैशाख कृष्ण औशिको दिन मनाईदै आएको छ । यस वर्ष अर्थात २०७७ सालमा बैशाख ११ गते बिहीबार अर्थात आजै उक्त दिन परेको छ । यस पर्वमा आमाप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गरिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत पिङ्गलास्थानस्थित रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रकी डा. उरुसा पौडेल भन्नुहुन्छ, आमाको अनुहार हेर्ने अति पवित्र दिनमा सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र आमाको अनुहार हेर्दा राम्रो हुने सुझाव दिनुहुन्छ ।
मातातिर्थ औंशिका दिन जीवित आमालाई मिठा परिकार र नयाँ वस्त्र उपहार दिने गरिन्छ र दिवंगत आमाको सम्झनामा तर्पण, पिण्ड दान र श्राद्ध गरी सम्झना गरिदै आएको छ । जीवित अथवा दुुवै आमाको तृप्तिका लागि यस दिनलाई पूून्य पर्व मानिन्छ ।
यस अवसरमा काठमाडौंको पश्चिमी भेगमा रहेको माथातिर्थमा प्रत्येक वर्ष मेला लाग्दै आएको छ । यस वर्ष भने कोरोना महामारीको संक्रमण फैलने डरले ठूूलो मेला लाग्ने छैन । यथास्थानमै मानिसहरुले आमाको श्रद्धा, भक्ति र सम्मानका कामहरु गर्नेछन् । उक्त माथातिर्थमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरु समेत आमाको श्राद्ध गर्न जाने गरेका थिए ।
हिजोआज सामाजिक सञ्जालले अँझ यसको प्रचारप्रसारमा मदत पुुगेको छ । आमालाई खुुशी राख्नुुपर्छ वा आमाको सेवा गर्नुुपर्छ भन्ने कुुराहरु धेरैले मनन् पनि गरिरहेका छन् भने आ आफ्ना आमाको फोटो फेसबुुकमा राखेर चिनाउने गरेका छन् । कतिपयले यसलाई विकृति पनि ठान्दछन् भने पछिल्लो समयमा स्मरण गर्नुुलाई या सवैले चिन्नेगरी फोटो राख्नुुलाई स्वभाविक रुपमा पनि लिने गरिएको छ । तर दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध गर्नुपर्ने, पिण्ड दिनुुपर्ने र दानपुुन्यका कामहरु गर्नुुुपर्ने जस्ता कुुराहरु भने खासै बढेका छैनन्् ।
तर जे भएता पनि आमाबुवा भनेका जिउदा देवता हुुन्, आमा बुुवाको सम्मान गर्नुुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, आमा बुुवालाई खुुसी बनाउनुुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई सामाजिक सञ्जालले अँझ बढि जानकारी दिने गरेको छ । दिवंगत मातापिताको लागि पनि सवैले स्मरण गर्ने र फोटोहरु राखेर अरुसामुु पहिचान गराउने कार्य धेरैले गरेको देख्न सकिन्छ । सन्तानका लागि आमाको महिमा संसारका सवै मानवका लागि उत्तिकै महत्वपूूर्ण छ । आमा बुुबाको सेवा र सम्मान गर्नुुपर्ने कुुरा हिन्दुुहरुको लागि मात्रै नभै समग्र मानव जातिको लागि मनन्योग्य कुुरा हुुदै गएको छ । अतः जन्म दिने आमालाई खुुसी राख्ने, सम्मान गर्ने र आमालाई सम्झिने दिनको रुपमा यो पर्वले महत्व पाउदै आएको छ ।
बढ्दैछ योगको महत्व
भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (जुन २१) नेपालमा पनि भव्य रुपमा मनाईएको छ । दिवस्का […]
भोट कसलाई हाल्ने ?
निर्वाचनको समय नजिकै आईसक्यो । यहि बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन छ । अब […]
दृष्टिबिहीन बालबालिकाको लागि निःशुुल्क योग शिविर सञ्चालन
सल्यान, १३ चैत । दृष्टि बिहीन बालबालिकाहरुका लागि सल्यानमा निःशुुल्क योग शिविर सञ्चालन भईरहेको छ […]
‘बनगाड लोक साहित्य महोत्सव २०७८’ को तयारी पुुरा
सल्यान, १३ चैत्र । सल्यान कला साहित्य परिषद् सल्यानले ‘बनगाड लोक साहित्य महोत्सव २०७८’ को […]
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सल्यान आएर के के गरे ? के के भने ?
गुुरु जजुुरमा योगाभ्यास शुुरु
युक्रेनको राजधानीतर्फ अघि बढ्यो रुसी सेनाको लस्कर
व्यवस्थित नगर बन्दै सल्यान श्रीनगर
बजार तताउदैछ, ‘साह्रै मन अत्याउने’ लोक दोहोरी गीतले
नेपाली भूमी भारत सरकारले अतिक्रमण गर्दा पिडाबोध भएपछि सल्यानी बैदार काकाको मोदी सरकारलाइ पत्र
सल्यानको पत्रकारिता मर्यादित रुपमा अगाडि बढेको छ,
कोरोनाले मृत्यु भएमा शब के गर्ने ? मन्त्रालयले यस्तो बनायो १९ बुँदे नियम
सल्यानमा एन.आई.सी बैंक लिमिटेड को शाखा उद्घाटन
शारदा नगरपालिका १, सल्यान
९८४७८८६८७१, ९८०९८७०६०२, ९८०९७९१९२५
प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक: गोविन्द प्रसाद शर्मा
सम्पादक: प्रेम कुमार शर्मा
सह सम्पादक: नोखिराम थापा
कम्प्यूटर अपरेटर: गणेश बि.क.
बजार निर्देशक: शुकदेव कसेरा
बजार व्यवस्थापक: कमल रोकाय
भाषा सम्पादन (अंग्रेजी): हरिचन्द्र शर्मा
©२०१९ Kumakh Rastriya Dainik. All Rights Reserved.
Powered By : TopLine